Ahoana ny fametrahana endri-tsoratra amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Rehefa miasa miaraka amina antontan-taratasy iray, na miaraka amina sary miendrika sosona dia afaka mahita olana izay tsy nananantsika isika, ary izany dia ny fametrahana ilay endritsoratra ampiasaina ao amin'ny solosaintsika. Amin'ireny tranga ireny dia mila izany isika mandehana any amin'ny DataFont na 1001 Font maimaim-poana hitadiavana sy hametrahana azy.
Raha tsy napetraka ny fontsika, ny fampiharana izay tiantsika hanovana ny rakitra dia hampiasa endri-tsoratra hafa amin'ny alàlan'ny default, font izay miharihary fa tsy mamela antsika hahita Inona no valiny farany ny antontan-taratasy na sary izay amboarinay.
Rehefa mampidina ny endri-tsoratra isika dia tsy maintsy mahatadidy fa ny ankamaroan'izy ireo dia natao hampiasaina manokana tsy ara-barotra, koa raha toa ka ara-barotra ny tanjon'ilay endritsoratra dia mety hanana olana amin'ny zon'ny mpamorona azy isika. Apetraho ny fampiharana Dingana tena tsotra izy io ary afaka segondra vitsy monja.
Mametraha endritsoratra amin'ny Mac
Ny fomba haingana indrindra raha tsy manana rindranasa miaraka amin'ireo endritsoratra te-hametraka isika dia tsy maintsy miroso amin'ny alàlan'ny tanana amin'ireto dingana manaraka ireto.
Mankany amin'ny menio aloha isika Ir avy amin'ny Finder.
Rehefa tafiditra ao anaty menio dia tsindrio ilay lakile Option, ary ny safidy fidirana fitehirizam-boky, izay tokony hidirantsika voalohany mba hahafahantsika miditra amin'ny folder Fonts.
Raha tsy miseho izany dia kitiho ny Go to the folder ary soraty ny làlana / Tranomboky
Rehefa tafiditra ao amin'ny tranomboky isika, dia mitady ilay fampirimana endritsoratra ary miditra ao aminy isika.
Manaraka, mila fotsiny isika sintomy ny endritsoratra te hametraka amin'ny Mac izahay amin'ity folder ity.
Ny maha-dingana iray izay misy fiovana ao amin'ny rafitra, macOS hangataka ny tenimiafin'ny mpitantana, raha tsy misy izany dia tsy ho afaka hametraka ireo loharano vaovao izahay.
Vantany vao vita ny fizotran'ny fametrahana font, azontsika atao izao ny manokatra ny rindranasa izay tiantsika hampiasa ireo loharano vaovao fa alaina sy apetraka amin'ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fametrahana endri-tsoratra amin'ny Mac